Jiratooni Magaalaa Finfinnee qaalawiinsa Kuduraa fi muduraatin rakkanne jiraachuu dadhabne jedhu dhumnee jecha jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVJiratooni Magaalaa Finfinnee qaalawiinsa Kuduraa fi muduraatin rakkanne jiraachuu dadhabne jedhu dhumnee jecha jiru.
Jiratooni Magaalaa Finfinnee qaalawiinsa Kuduraa fi muduraatin rakkanne jiraachuu dadhabne jedhu dhumnee jecha jiru.
QOQQOBBII DINAGDEE FINFINNEE: Hamma Finfinneen Kaatee Oromoo Waliin Dhaabbattee Mootummaa Mormitutti Kuni Itti Fufa!
Mootummaan Amhaaraa Oromoo ajjeesaa Amhaarri Mootummaa Oromoo Ajjeesuu fi Hidhu deggertee Quuftee Jiraachuu Hin Qabdu.
Ka’anii Mootummaa balaaleffatanii aangoo irraa buusuuf Oromoo waliin haa dhaabbatani. Didnaan sichi itti fufa! Yoo isheef hin taane ammoo Oromiyaa (Finfinnee) gad dhiiftee iddoo dhuftetti haa deebitu!!
Qeerroo should continue to shutdown ”Addis Ababa”. The roads are not completely 100% cut but disruptions have caused significant economic turmoil in the city. Now it has to boil over and burn down the palace where the evil force is menacing the country from.
Sead Usmael Yusuf
Jiratooni Magaalaa Finfinnee qaalawiinsa Kuduraa fi muduraatin rakkanne jiraachuu dadhabne jedhu dhumnee jecha jiru. Qeerroon Oromoo guyyaa takkatti Finfinnee harkaa kennachise.
Mootummaan Amhaaraa Dhiibbaa CIAn Ammuma Jawar Mohammad Baaftee Yoo Aangoo itti Kennite iyyuu WBOn TUMUU Itti Fufa!
Kaleessa Diasporaa taa’ee WBOtti bobba’aa ba’e; biyya erga gales bilisoomneerra qawween nu hin barbaachisu jedhee Mootummaa waliin dhaabbatee WBO diiguu fi hiikkachiisuuf Koree ijaaree fiffiigaa ture Jawar Mohammad fi Baqqalaa Garbaa DIINA WBO fi Diina Ummata Oromoo ti. Jawar Media OMN Oromoota harka micciiree irraa fudhatee ittiin duroomee media mataa isaa godhatee sagalee qabsoo WBO ukkaamse takkaa fira WBO ta’uuf hin deemu. Sodaan Jawar nama QAWWEE qabatee jiru injifatanii ykn iyyaalummaa lafa gabaan dhabamsiisuun akka hin danda’amne waan beekuuf WBO jibba; diiguuf hojjeta.
Diinni kaleessa akkas ture BOR gaafa aangoo qabate WBOf diinuma ta’a; takkaa fira ta’uun hin jiru. Hamma fedhe gowwoomsee kiyyoo galchuuf Jawar yaalus WBOn ni dida. Lola isaa itti fufee Jawariin aangoo irraa fenqelaachisa!! Diinni kalee akka lammata WBOn hin kaane gochuuf WBOn hin hayyamu.
Warri karaa Qaxxaamuraa aangoo qabanna jettanii fiffiigdan GOOBANOOTI akka Jawar adabadhaa. Wal dhiisuuf hin deemnu! GOOBANOOTI Diaspora Jawar jala yaatanis ofumaa dhamaatu!
Kuni Hin Haftu!! Humna Rabbiin!
DOOFUMMAA Mootummaa Amhaaraa Abiy: Oromoon Miliyoona 60 ta’uun Badhaasa RABBII Ti. Oromoon Galaana Waraabanii Hin Fixne!
Miliyoonatu Iddoo Warra Hidhanii fi Ajjeesanii Falmaatti Jira!
HUBACHIISA: Iskinder Naggaa, ABIn, Gimbot-7 Kan Birahanu Naggaa akka QEERROOn humna TERRORIST ta’ee fi BADUU QABU Labsanii turan. Oromoota keessa Namoota IJO Ajjeesuun imaammata kana irraa maddee hojii irra oolaa jira.
Warri Amhaaraa Abiy Oromoo beekamoo fi qaroo qabanii hidhuu fi keessaa ajjeesuun waan Oromoo dhaabu itti fakkaatee dhama’aa jirti. Warra hiite fi sichi hiitu hundi qabsoo Oromoo irraatti HIR’INA Cimaa hin fidani. Qabsoon ittii finiinti. Qeerroo ajjeesanis jalaan ka’iin guddataa jirtu dhalootni ibidda taate qabsicha dhaaluuf qophoofteetti.
QEERROO fi ummata Oromoo irraa kanneen IJA QABSOO ta’an kana dura argatanii BOSONAtti galanii WBO ijaarratanii cimsanii lolaa fi lolchiisaa jiru. Humni baratee fi hayyuun WBO keessa har’a jiru takkaa seenaa ABO/ WBO keessatti QUALITY akkasii qabaatee hin beeku. Dur namni ABO keessaa waa barate hedduu yartuu turte. Amma irra guddaan WBO nama baratee dha. Isaan qofti yoo qabsootti cichani iyyuu INJIFANNOO Oromoo hanga fiduutti hooggana kennuu danda’u.
Ammoo mootummaan fedhe nama ajjeessaa fi hidhaa itti fufuun tasa hin danda’amu. Ammuma iyyuu rakkoon siyaasaa hamaan mootummaa Amhaaraa mudatee jira.
DHAAMMANNAA: Roorroo of irraa Dhiitatan of Irraa Kutu!
January 2020 irraa kaasee hamma ammaatti Oromoof yeroo hamtuu turte. Oromoo ajjeesuu, hidhuu, gudeeduu, qabeenya gubuu, biyyaa baasuu fi kkf. hundi kan godhaman OROMOO JIILCHUU kaayyoo jedhamu turte. Hin taane. Oromoon XIIQII qabate. Qabsoo caalaatti itti fufe. Kan du’e awwaallatee lola itti fufaa jira. Kanaaf Yoo Mootummaan Oromoo Ajjeesuu, Hidhuu; Gudeedchisuu kkf. dhaabuu baate:
(1) Yeroon hamtuu kun ammaan booda hedduu hin turu. Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun Mootummaa Amhaara Abiy TURNING POINT haala qabsoo as baasee jira. Sichi hamma Amhaarri Oromoo ajjeesuuf yaaltu yeroo gabaabaaf qofa. Dhaabuuf dhirqamti. Kanaaf Oromoon ciniinnatee qabsaawuu cimsuu qaba. Darbuuf deemti.
(2) Oromoon fincila haaromtee kaate du’a Hacaaluun booda tarkaanfii Amhaara Mootummaa waliin Oromootti bobba’an kan Oromiyaa keessa jiraatani irratti fudhate Amhaara LAALESSEERA. Amhaarri Oromiyaa hundi mootummaa Amhaaraa Abiy Deggeru. Kan Hacaaluu ajjeesuuf mootummaan bobbaase jara kana. Kanaaf, yoo mootummaan Amhaaraa yeroo QEERROOn Hiriira mormii kaasu loltootaa fi poolisii itti bobbaasee nama Oromoo tokko illee miidhe ykn. rukute:
(a) Qabeenya Amhaaraa argan gubuu dha.
(b) Ijoollee Amhaaraa akkuma isaan ijoo keenya ajjeesan Oromoon ILMAAN ANGAFA Amhaaraa ajjeesuun dachaan gumaa baasuu dha.
(c) Dhaabbata nagadaa mootummaa gubbuu dha.
(d) Warshaa Investeroota alaa guggubuun akka isaan mootummaa waliin hin dhaabbanne gochuu fi akka isaan rakkoon mootummaan Oromoo irraan ga’u gufuu investment itti ta’e akka hubatan gochuu dha.
(e) Karaan guguddaan cufamee Finfinnee irratti qoqqobbii dinagdee labsuu fi waa hunda irraa kutuun beelessuu fi jireenya itti hadheessuu dha.
(f) Poolisii fi loltoota keessa Oromoota jiran akka isaan gananii WBOtti dabalaman ijaaruu dha.
AMHAARRI OROMIYAA KEESSA JIRAATEE DANTAA OROMOO HIN KABAJNEE FI OROMOO SARBUUF HOJJETU OROMIYAA KEESSA JIRAACHUUF MIRGA HIN QABU!! KAN OROMO WALIIN DHAABBATEE OROMOOF FALME QOFATU JIRAATEE HORATA!!
XIIQIIn Hamma Oromoon Ga’u Amhaara Biyya ishee irraa Nutti Godaantee Oromiyaa Nutti Falmaa Jirtu Haa Barsiifnu! Adabatanii akka Nu Kabajan Haa Goonu.
Jaal Sanyii Nagaasaa Ajajaa WBO Zoonii Giddu Galeeysaa fi Radioni Arraata Bayyaaleeysa Oromiyaa
Harmeen ishee duunaan poolisiin ajjabamtee booyicha harmee
Ethiopia flip flops on ‘contentious’ filling of massive dam